PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-09-10 - Amambazo, ulira n
Amambazo, ulira n
Ilanga langeSonto - 2017-09-10 - Ezikaqedisizungu - KNOWLEDGE SIMELANE
PHEZU kokuqeda iminyaka eyisi9 eshadile, uthi asikamfikeli isifiso sokuba abe nomntwana umculi we-afro Jazz, ulira, ogama lakhe langempela ngulerato Molapo wasedaveyton, egoli.
Le ntokazi idalule lezi zindaba ngesikhathi inengxoxo ekhethekile NELANGA Langesonto estudiyo seladysmith Black Mambazo ethekwini ngoLwesithathu. Phela ubezofaka iphimbo lakhe eculweni eliqanjwe ngo-oliver Tambo owabe engumengameli we-african National Congress ANC, eliculwa yimambazo.
Iphimbo lakhe kule ngoma esihloko sithi “Long Live Oliver Tambo “liyenze yahlabahlosa kakhulu phezu kokuba vele imambazo inamaphimbo akushiya usalangazelela okuthe xaxa.
Ekhuluma ngokunikezwa kwakhe ithuba lokufaka iphimbo lakhe kule ngoma uthe: “Nginqamule uhambo lwami lwaselos Angels, e-united States of America (USA), ngabuya emuva kokucelwa nguxolani Majozi, oyimenenja yeqembu, ukuba ngibe yingxenye yale ngoma enomlando.
“Ngithokozile, ngiswele amaphiko okundiza ngoba kade ngangifisa ukusebenza nale mizwilili engamambazo amnyama. Ngikhulele ewattville ebenoni, lapho kunendlu kababa utambo. Sikhule sizwa ngaye, sangenwa wum wepolitiki singamazi ngakho ngizinik ukuba ngizocula ngapha-ndle kwenkokhelo ngiqhutshwa wutha-ndo
ULIRA esesitudiyo neladysmith Black M